बढ्यो अमेरिकी डलरसहित अन्य देशको विनिमयदर, कुनको कति ? - dautarimedia.com
बढ्यो अमेरिकी डलरसहित अन्य देशको विनिमयदर, कुनको कति ?
sanjay July 22, 2021 1 min read
काठमाडौं । अमेरिकी डलर, युरोसहित अन्य देशको विनिमयदर केही घटबढ भएको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १ सय १९ रुपैयाँ ९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय १९ रुपैयाँ ६९ पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै कोरियन वन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ ३८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर १० रुपैयाँ ४३ पैसा तोकिएको छ । एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १ सय ६२ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय ६३ रुपैयाँ २३ पैसा तोकिएको छ।
एक युरोको खरिददर १ सय ४० रुपैयाँ ४० पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर १ सय ४१ रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ । एक साउदी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ ७५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ९१ पैसा तोकिएको छ ।
एक बहराइन दिनारको खरिददर ३ सय १५ रुपैयाँ ९० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय १७ रुपैयाँ ४९ पैसा तोकिएको छ। एक कतारी रियालको खरिददर ३२ रुपैयाँ ७१ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ८७ पैसा तोकिएको छ ।
एक मलेसिया रिंगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ १९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिएको छ । एक कुवेती दिनारको खरिददर ३ सय ९५ रुपैयाँ ८८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ९७ रुपैयाँ ८८ पैसा तोकिएको छ।
त्यस्तै जापानी यनको खरिददर १० रुपैयाँ ८९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १० रुपैया ९४ पैसा तोकिएको छ । यस्तै एक अस्ट्रेलियन डलरको खरिददर ८७ रुपैयाँ २६ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ८७ रुपैयाँ ७० पैसा रहेको छ ।
Previous: कारभित्र दुई बर्षको बच्चा बिर्सिइन्, सात घण्टापछि आउँदा नानीको बन्द भै सकेको थियो सास
Next: फेरि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ?